नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १८, ५० जना घाइते !
बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १८, ५० जना घाइते !
सुर्खेतको पोखरीकाँडामा आइतबार राति भएको यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १८ पुगेको छ । कालीकोटबाट कैलालीको टीकापुरका लागि छुटेको पोखरीकाँडा गाविसको वडा नम्बर ९ अमलिसे भीरबाट खस्दा झन्डै ५० जना घाइते भएका छन् । घटना परी ज्यान गुमाउने मध्ये १६ जना बाजुराको गोत्री गाउँका रहेका छन् । भारतमारोजगारीका लागि हिँडेका एउटै गाउँका १६ युवाको मृत्यु भएपछि गोत्री गाउँ शोकमा डुबेको छ
सडक दुर्घटना : ५ महिनामा १ हजार जनाको मृत्यु !
Posted by www.Nepalmother.com at 12:29 PM